Ahoana ny fametrahana ny pin ho an'ny sms ao amin'ny Twitter? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 752
Ny mpampiasa Twitter dia manana ny safidiny apetraho ny PIN an'ny SMS; Ho an'ity tanjona ity dia mila manaraka ity fomba ity ianao: Voalohany, tokony ho azonao antoka fa mifandray amin'ny kaonty Twitter ny fitaovanao finday.
Manaraka izany, miditra ao amin'ny kaonty Twitter-ny amin'ny Internet ny mpampiasa ary ao amin'ny Fikirakirana finday; Ampidiro ny PIN tianao, izay tsy maintsy manana litera alfanumerika efatra, ary mankanesa eo ambanin'ny pejy, kitiho ny fanovana Save.
Raha ny PIN an'ny mpampiasa, hisy hafatra fanamafisana hiseho. Raha nanetsika PIN ho an'ny kaontiny ny mpampiasa dia tsy maintsy ampidiriny alohan'ny lahatsoratra amin'ny Tweet na ny baikon'ny SMS alefany any amin'ny kaody fohy ao amin'ny Twitter-ny.
Ovao na hamafana ny PIN amin'ny Twitter
Ny PIN dia isa fanondroana manokana azon'ny Mpampiasa ampiasaina miantoka fiarovana avy amin'ny kaonty Twitter anao. Miaraka amin'ny PIN dia azonao atao ny manampy ny prefo amin'ny fanavaozana anao sy ny baiko finday.
Ny Mpampiasa, indray mandeha nampihetsika ny PIN-nao Ho an'ny kaonty Twitter anao dia manana safidy ianao hanovana na hamafana ny PIN. Amin'io lafiny io dia mitaky fandehanana any amin'ny Configuration of mobile phones; raha vantany vao tonga dia hita ny saha PIN.
Ao amin'ny saha PIN, mahazo ny Mpampiasa Manova na mamafa ny PIN-nao indray mandeha. Ho an'ity tanjona ity dia mila mihodina mankany amin'ny faran'ny pejy ianao ary miroso amin'ny safidy Save save, kitiho.
Mamorona horonantsary mivantana amin'ny TWITTER
Ao amin'ny sehatra Twitter, ny mpampiasa dia manana fotoana mety mamorona horonantsary mivantana ary zarao izay mitranga amin'ny fotoana tena izy. Twitter no toerana mety indrindra hahazoana vaovao amin'ny lohahevitra manerantany.
Mba hamoronana horonantsary mivantana ny mpampiasa Twitter dia mila manao izao manaraka izao ianao: Tsindrio ny boaty Tweet; tsindrio Live in the lower selector; mandefa mivantana, azonao atao ny mamono ny fakantsary ary tsy mandray anjara afa-tsy amin'ny audio, eto tsindrio ny mikrô.
Manaraka, tsindrio ny User amin'ny Transmit Live; afaka atsaharo ny horonantsary mivantana nataonao Na oviana na oviana, tsindrio ny Stop amin'ny havia havia havia ary hamafiso ny safidinao ao amin'ny menio aseho.
Avelao ny mpijery hangataka hanatevin-daharana ny Twitter-ko
Ny mpampiasa Twitter dia manana safidy mamela ireo mpijery hangataka Midira amin'ny StreamMila manaraka an'ity fomba fiasa ity ihany ianao: tsindrio ny boaty raha hi-tweet; Tsindrio Live eo ambanin'ny boaty.
Tsindrio ny kisary eo amin'ny zoro havanana ambony mba hahamora ny fampiasan'ny mpampiasa azy Mpijery mivantana, Fangatahana hidirana amin'ny famindrana ny mpampiasa; tsindrio ny Broadcast mivantana hanombohana ny fampielezam-peoo amin'ny tambajotra sosialy Twitter.
Rehefa mpampiasa Twitter Fangatahana hiditra amin'ny Fampitana ny Mpampiasa, hisy fampandrenesana hiseho ao amin'ny chat; tsindrio ny kisary hanampiana azy. Raha manapa-kevitra ny hanala vahiny ianao dia tsindrio X eo ankavanan'ny avatar an'ny avatar azy ireo.
1 Ovao na hamafana ny PIN amin'ny Twitter
2 Mamorona horonantsary mivantana amin'ny TWITTER
3 Avelao ny mpijery hangataka hanatevin-daharana ny Twitter-ko